Shuruudaha farsamo ee loogu talagalay qaybaha mashiinada iyo qaybaha - Dongguan Tuoyuan qiray Makiinado Co. LTD.
Nidaamka habeynta qaybaha waa habka tooska loogu beddelayo muuqaalka alaabta ceyriinka ah si looga dhigo badeecado nus dhammaad ah ama dhammaaday. Nidaamkan waxaa loo yaqaan habka farsamada. Waa halbeegga lagu farsameeyo qaybaha iyo saxitaanka qalabka farsamada. Nidaamku wuu ka dhib badan yahay.
Astaamaha lagu garto habka wax-u-qabashada ee qaybaha saxda ah ee farsamooyinka ayaa loo qaybin karaa qaybo iyadoo loo raacayo habab kala duwan: shubay, foorjo, shaabbadaynta, alxanka, daaweynta kuleylka, makiinadda, isu imaatinka, iwm. hawsha. Kuwa kale sida nadiifinta, kormeerka, dayactirka qalabka, shaabadaha saliida, iwm. Habka rogayaashu wuxuu beddelaa sifooyinka dusha sare ee alaabta ceyriinka ah ama alaabada nus dhammaadka ah. Nidaamka makiinada CNC ee warshadaha waa habka ugu weyn.
Hawlaha dusha sare ee qaybaha
1. Dulqaadka qaabka aan calaamadeysnayn waa inuu buuxiyaa shuruudaha GB1184-80.
2. Leexashada la oggol yahay ee cabbirka dhererka aan calaamadeysneyn waa ± 0.5mm.
3. Majiraan gacan faneed R5.
4. Dhammaan qolalka aan buuxin waa C2.
5. Xagasha fiiqan waa obtuse.
6. Afka afkiisu waa caajis, oo dabkii iyo falkii waa la saaray.
Daaweynta dusha sare ee qaybaha
1. Waa inaysan jirin xoqitaan, xoqitaan iyo cilado kale oo waxyeeleeya dusha sare ee qaybta.
2. Dusha sare ee dunta la farsameeyay looma oggola inay yeelato cillado sida maqaarka madow, kuuskuus, badhamada kala sooc la'aanta ah iyo burrs. Kahor intaan la rinjiyeyn dusha dhammaan qaybaha birta ah ee u baahan in la rinjiyeeyo, miridhku, miisaanka xabagta, dufanka, boodhka, ciidda, milixda iyo wasakhda waa in laga saaraa.
3. Kahor intaadan miridhku ka bixin, isticmaal dareeraha dabiiciga ah, dheecaanka, emulsifier, uumiyaha, iwm si aad uga saarto dufanka iyo wasakhda dusha sare ee qaybaha birta.
4. Waqtiga udhaxeeya dusha sare ee lagu daboolayo qarxitaanka toogashada ama derustinka gacanta iyo daaha aasaasiga ah waa inuusan ka badnaan 6h.
5. Dusha sare ee qaybaha dillaacaya ee midba midka kale taabanayo waa in lagu rinjiyeeyaa rinjiga ka hortagga miridhku oo dhumucdiisuna tahay 30-40Î¼m ka hor inta aan la isku xidhin. Cidhifyada dhabta ah waa in lagu xiraa rinjiga, dhejiska ama dhejis. Waxyaabaha aasaasiga ah ee waxyeellada u geysatey farsamaynta ama alxanka waa in dib loo rinjiyeeyaa.
Xulashada qalabka sidoo kale waa inuu noqdaa mid macquul ah oo sax ah. Xadgudubku waa in lagu fuliyaa qalab mashiin awood sare leh, maxaa yeelay ujeedadiisa ugu weyni waa in la jaro inta badan gunada makiinada, shuruudaha saxsanaantuna sidaa uma badna. Si kastaba ha noqotee, ka shaqeynta ganaaxa, qalabka mashiinka-saxnaanta sare ayaa looga baahan yahay ka shaqeynta. Xulashada macquulka ah ee qalabka mashiinka ma xaqiijin karo oo keliya saxsanaanta waxqabadka, laakiin sidoo kale waxay dheereyneysaa adeegga mashiinka.
Heerarka u dejintu ee habka saxda ah ee farsamaynta qaybaha farsamooyinka waxaa ka mid ah jaangooyooyin meelaynta ah, kuwaas oo ay isticmaalaan latashiyo ama dheellitiryo marka lagu shaqeynayo lathe CNC ah. Qiyaasta cabbiraadda, cabbirkaan ayaa inta badan loola jeedaa cabbirka ama heerarka goobta ee u baahan in la ilaaliyo inta lagu jiro kormeerka. Kaydinta Golaha, xog uruurintani waxay inta badan loola jeedaa heerka booska qaybaha inta lagu gudajiro hawsha kulanka.
Samee makiinadaha wax lagu farsameeyo waa inay ogaadaan waxyaabaha